Banyere Anyị - Xuzhou Shengsida Construction Machinery Co., Ltd.
Akụ klọọkụ mapụtara
Akụkụ Hydraulic nke Crane
Crane Hydraulic valvụ
Crane Counterbalance valvụ
Mkpọchi Hydraulic mkpọchi
Crane na-arụ ọrụ Valve
Hydgbọ mmiri ndị ọzọ
Igwe Igwe Hydraulic
Crane Hydraulic Mgbapụta mmanụ
Ngwongwo Mmanụ Egwuregwu Crane
Kreenu Plunger mgbapụta
Ngwongwo mmanụ nke Crane
Akụkụ Crane Chassis
Akụrụngwa nke kreenu
Ngwongwo Hydraulic nke Crane
Crane Horizon sịlịnda
Crane Luffing sịlịnda
Kreenu No.5 Outrigger sịlịnda
Crane na-aga Aidoiljar sịlịnda
Crane Telescopic sịlịnda
Sịlịn Vetikal Crane
Igwe Oti mkpu nke Crane
Kreenu Back Fog Light
Ìhè nke Okike Crane Back
Ìhè Kpachara Anya Crane
Crane jikọtara ọkụ ihu igwe
Kreenu Fog Oriọna
Kreenu Aha-efere ọkụ
Ìhè ụgbọala na-adọba ụgbọala
Crane Ọrụ Light
End-Ndepụta Mark Oriọna
Kreenu Myọcha mmewere
Hydraulic mmanụ nyo
Ndị ọzọ nyo
Clutch master mgbapụta
Clutch sub mgbapụta
Usoro Crane Torque
Ogologo na akuku ihe mmetụta unit
mmanụ mgbali ihe mmetụta
Usoro kreenu usoro
Na-ebute mgbapụta mmanụ
N'ịga ogwe aka
N'iru igwe mkpanaka
Crane Structural akụkụ
Crane pole na mmịfe
Usoro eletriki kreenu
Crane Cab na ngwa
Ndabere azụ mgbodo
Ogwe ime ụlọ dị n'ime
Gearbox na ngwa
Usoro ụzọ gas
Eriri igwe & mgbanaka
Guzosie ike na 2005, Xuzhou sheng si da Machinery Co., LTD, ọkachamara na azụmaahịa nke ngwa ndị ọzọ nke igwe nrụpụta na igwe zuru ezu.
Company'slọ ọrụ ahụ ụzọ bụ otu n'ime ndị mbụ distributer nke XCMG, Zoomlion, Sany Arọ Industry Co., LTD na Guangxi Liugong Machinery Co., LTD, tọrọ ntọala na 2000, nke na-eje ozi anụ ụlọ ahịa ruo ogologo oge ma merie nnukwu mmasị ndị ahịa na-atụkwasịkwa ya obi. Site na mmepe ngwa ngwa nke ijikọ ụwa ọnụ, ụlọ ọrụ anyị eguzobela maka ịgbasa ahịa mba ụwa.
Emi odude ke dị mkpa njem ehiwe obodo ke China –Xuzhou, nke a na-akpọ "OrientalAthens" na "obodo nke na-ewu ígwè ọrụ na China", anyị na-enweta adaba ohere isi njem netwọk, ukwuu na-amị na ahịa ahụmahụ dị ka nke ọma dị ka high- ngwaahịa ngwaahịa. Isi ahia anyị gụnyere Russia, Africa, Middle East, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ.
Jighi ikike akara na-ekpuchi usoro ọ bụla, site na ị nweta ihe na nhazi site na nyocha na mbukota, na-agbasi mbọ ike inweta ogo nke "oke mma na ntụpọ efu".
Dabere na àgwà ngwaahịa, magburu onwe ọrụ, ezi uche price na-adọ nnyefe, anyị na-atụ anya togood imekọ ihe ọnụ na mmekọ na ụlọ na mba ọzọ na-eke ebube ọdịnihu.
Original akụkụ ahụ mapụtara
Biko kpọtụrụ anyị maka akụkụ mbụ ahụ. Tụkwasị na nke a, anyị bụkwa ndị na-eweta ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ dochie anya ọtụtụ ụdị, nke banyelarị ngwaahịa ahụ site na inweta usoro.
Akụkụ kreenu maka ọtụtụ ụdị
Anyị maara cranes nke ọtụtụ ụdị, ọ bụghị naanị akara XCMG. Ohaneze, XCMG nwere ike zụta kreenu akụkụ ahụ mapụtara site mbụ na ngwá emepụta.
Anyị nwere ike ịmepụta akụkụ ndị na-echekwa nkọwa gị. Akụkụ ndị a kwadebere onwe ha gụnyere nko, esi anwụde, gia na biarin. Ngwaahịa dị maka ire ere na mpaghara ahọpụtara, biko kpọtụrụ anyị maka nkọwa.
Ndụ okirikiri nlekọta
Usoro mmezi nke kreenu anyị dabere na nlekọta ndụ ndụ, nke bụ usoro nhazi zuru oke na usoro nhazi nke usoro ọrụ na usoro ụwa na-akwado. Nlekọta ndụ ndụ na-enweta ngwa ọrụ dị elu nke ndụ na-abawanye uru site na imeziwanye arụmọrụ nke oge na ibelata ụgwọ ọrụ oge.
Ozi oge niile
Anyị na-etinye Ọrụ Ntanetị iji nyochaa, nyochaa, nyocha, na ịkọ ọrụ mmezi dabere na ojiji. Nye ndị ahịa nghọta na ịkekọrịta ozi, ezigbo ahụmịhe ndị ahịa pụrụ iche.
Omenala nchekwa na ndekọ
Na Konecranes, ọ dịghị ihe dị mkpa ma dị mkpa karịa ịhụ na arụ ọrụ anyị n'enweghị nsogbu na n'ụzọ ziri ezi.
Ọrụ anyị na-agba izu na-enyere aka ịghọta usoro gị na arụmọrụ gị nke ọma.
Ikwenyesi oru ike
Konecranes na-enye usoro zuru ezu nke mmemme ọrụ ahaziri iche na ngwaahịa iji gboo mkpa gị.
Ahịa Zero Ndị Ahịa
Anyị nwere netwọkụ ọrụ zuru ụwa ọnụ, ma anyị nwere ụlọ ọrụ ọrụ 600 na mba 50.
Dịka ụlọ ọrụ pụtara ìhè, anyị adọtala ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke onyinye pụrụ iche. Ha nwere ike nọrọ n'ihi nkwa anyị na-eme iji nweta uto na mmepe.
Anyị nwere mmemme ọzụzụ na asambodo mmemme iji meziwanye nchekwa na nrụpụta ọrụ. Ọrụ anyị na-akwado site na netwọk teknụzụ nke ụwa.
Anyị bụ ndị nrụpụta akụrụngwa dị elu nwere ihe karịrị afọ 100 na ahụmịhe na ngwa 600,000 gụnyere na nkwekọrịta ndozi. Ahụmahụ Konecranes na-emetụta ụdị akara azụmaahịa enwetara na ndị ahịa. Anyị nwere ikike ọgụgụ isi nke ụdị akara niile enwetara.
Dị ka ụlọ ọrụ magburu onwe ya nke na-enyochagharị na ngalaba nke R&D na teknụzụ smart, a nabatara arụmọrụ anyị n'inye ma na-akwado ngwaahịa na ọrụ ọhụụ.
Anyị na-atụ anya ijere gị ozi. Ngwaahịa anyị bụ isi dị ka ndị a. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ọzọ ọ bụla ekwughi na ya, biko nweere onwe gị ime ka anyị mara.